Richard Stallman, anaghị atụkwasị obi bitcoin ma na-atụ aro iji GNU Taler | Site na Linux
Richard Stallman, anaghị atụkwasị obi bitcoin ma na-atụ aro iji GNU Taler
Richard Stallman maara nke ọma maka ime ihe ike na ngwanrọ ngwanrọ n'efu. Ọ bụ n'echiche a kpaliri Stallman ịmalite GNU Project, chọta Free Software Foundation, ma bipụta GNU General Public License, n'etiti ọrụ ndị ọzọ, iji kwalite echiche nke ngwanrọ n'efu.
N'oge a gbara ajụjụ ọnụ, Stallman kesara echiche ya na echiche nke cryptocurrencies nke a kwurula ebe niile n'ime obodo crypto.
Ndị na teknụzụ n'ozuzu ha ha kwuru banyere ebumnuche gọọmentị China ịmepụta ego dijitalụ nke ụlọ akụ nke aka ha (CBDC), yana atụmatụ maka Bank of Thailand iji bido oru ngo nke usoro ịkwụ ụgwọ CBDC ya na ndị na-ebu ngwa ngwa kasịnụ na mba ahụ.
Agbanyeghị, ndị ọzọ kwenyere na CBDC nwere ike ịbụ usoro nyocha maka gọọmentị iji nyochaa ọrụ ego nke ụmụ amaala ha.
Na nke a Stallman blames "nyocha zuru oke" nke gọọmentị China dị ka ihe na-akpata ntụkwasị obi a:
“Usoro ịkwụ ụgwọ dijitalụ dị oke egwu ma ọ bụrụ na edoghị ya iji kwado nzuzo. China bụ onye iro nke nzuzo. China gosiri ihe nlebara anya nke ndi ochichi yiri. Nke a bụ akụkụ nke ihe m na-ejighi eji cryptocurrencies enyere obodo. Ọ bụrụ na ndị gọọmentị na-enye cryptocurrency, ọ ga-enyocha ndị mmadụ dị ka kaadị akwụmụgwọ na PayPal na-eme, yana sistemụ ndị ọzọ ndị a agaghị anakwere kpamkpam.
Otú ọ dị, ị naghị ahụ ihe ọ bụla na-emegiderịta onwe gị mgbe ị na-ekwu maka echiche nke cryptocurrency na eziokwu na enwere ike ịnye ya gọọmentị:
Nkwenye bụ echiche doro anya. Kedu ihe bụ cryptocurrency? Ọ bụ iji otu ụdị teknụzụ. Ọ bụrụ na gọọmentị na-etinye usoro a, anaghị m ahụ otu esi emegiderịta. Ma oburu na ndi ochichi ji ya dika ndi nche, echere m na o bu obi ojoo. «
Onye nchoputa nke ngwanrọ free software rụrụ iji kọwaa echiche nke »nzuzo« mgbe na-ekwu okwu banyere nzuzo nke cryptography:
"Gịnị bụ nzuzo? Nzuzo pụtara inwe ike ikwu na ime ihe na-enweghị ihe dị ike ejiri gị wakpo gị. Na mkpokọta, ihe ị na-eme ekwesịghị itinye ya na nchekwa data. Ihe ndị ị gwara mmadụ ole na ole ekwesịghị itinye na nchekwa data. Kaosiladị, ewezuga iwu a na-eme ihe ziri ezi mgbe ụfọdụ. Anyị kwesịrị ka gọọmentị nwee ike nyocha. Ọ chọrọ mgbanwe ụfọdụ. Anyị chọrọ ka gọọmentị nwee ike inyocha mpụ ma jide ndị omekome. Na nke ahụ nwere ike ịchọ ịnweta ozi nzuzo n'aka ndị mmadụ na gbasara ndị mmadụ ”.
Stallman na-enye GNU Taler ọzọ, agbanyeghị na ọ bụghị cryptocurrency, mana ekwuru na enwere ike iji ya maka ịkwụ ụgwọ dijitalụ. N'oge a gbara ajụjụ ọnụ, a jụrụ ya gbasara ahụmịhe nke ya na cryptocurrency.
Ọzọkwa Ajuju gi ma oburu na inweela ma obu transacted na cryptocurrency dika Bitcoin.
Richard Stallman kwuru, sị:
"Azịza ya bụ mba. Anaghị m eme ụdị ịkwụ ụgwọ dijitalụ ọ bụla na ihe kpatara ya bụ na sistemụ ndị dị ugbu a anaghị asọpụrụ nzuzo onye ọrụ, gụnyere Bitcoin. A na-ebipụta azụmahịa Bitcoin ọ bụla. Ndị mmadụ nwere ike ghara ịma na obere akpa m bụ nke m, mana ọ bụrụ na m jiri ya karịa oge ole na ole, ọ ga-ekwe omume ịchọpụta na ọ bụ nke m. Ndị nwere ozi zuru oke nwere ike ime nke a. Achọrọ m iji ego. Ma ọ bụ otu a ka m si azụta ihe.
“Ana m enyocha akwụkwọ ozi maka ọtụtụ ihe ebe ụlọ ọrụ mara onye m bụ. Mgbe m na-akwụ ụgwọ ọkụ eletrik na gas, enwere m akaụntụ na ụlọ ọrụ ndị a ma m ga-akwụ ya. Ha na-ezitere m akwụkwọ ọnụahịa n'aha m, n'ihi ya anaghị m efunahụ ihe ọ bụla site na izigara ha akwụkwọ ndọrọ ego n'aha m. Ma mgbe m gara ahịa gaa zụta ihe, ụlọ ahịa ahụ enweghị ikike ịmara onye m bụ. Agaghị m agwa gị onye m bụ, yabụ anaghị m eji sistemụ ịkwụ ụgwọ dijitalụ dị adị.
N'iso nzaghachi gị, jụrụ banyere mgbanwe dị iche iche Bitcoin Ezubere maka nzuzo. Richard Stallman zara:
"Ekwenyeghị m. Kedu ụzọ ọ bụla, GNU Project ewepụtala ihe ka mma, GNU Taler. GNU Taler abụghị cryptocurrency. Ọ bụghị mkpụrụ ego ma ọlị. Ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ ezubere iji jiri ego akwụ ụgwọ ụlọ ọrụ iji zụta ihe. «
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Richard Stallman, anaghị atụkwasị obi bitcoin ma na-atụ aro iji GNU Taler
Mee nyocha gị na Monero (xmr), ezigbo Richard.
Zaghachi na qwer
O doro anya na nwa nwoke a nke p… .m…. Hyperledger, ọ bụrụ n'otu aka ahụ, ya na Hyperledger ha gbalịrị iweghara ngọngọ ahụ, echiche nke pụtara DECENTRALIZATION, nke megidere Hyperledger na Stalman
Ọnọdụ jọgburu onwe ya na nchekwa satellitentanetị satịlaịtị
Pysa, onye nyocha ihe omimi nke Python nke Facebook nyere